Mascherano oo si xiiso leh kaga hadlay arrimo ku saabsan Lionel Messi & riyada koobka adduunka – Gool FM
(Paris) 20 Dis 2021. Halyeeyga xulka qaranka Argentina ee Javier Mascherano ayaa xaqiijiyay in laga yaabo in koobka aduunka 2022 uusan noqon doonin kii ugu dambeeyay ee saaxiibkiis hore ee Lionel Messi.
Messi ayaa ku guuleystay sanadkan 2021 in xulkiisa qaranka Argantina uu la qaado koob weyn ka dib markii uu ku guuleystay Copa America ee lagu qabtay dalka Brazil.
Wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga kubadda cagta ee dalka Argantina ee Javier Mascherano, wuxuuna yiri:
“Yaa og haddii Koobka Adduunka ee soo aadan uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee Messi? ma jirto da’a gaar ah oo aadan ku sii wadan karin ciyaarta.”
“Waxaa laga yaabaa inuu yahay kii ugu dambeyyay, laakiin Messi ayaa ah kan go’aamin doona.”
“Messi waxa uu gaaray guulo la yaab leh, wuuna sii waday in uu taas gaaro, laba todobaad kahor waxa uu ku guulaystay abaal marin cusub oo Ballon d’Or ah, waa qof aan isku dayin in uu naftiisa la bar-bardhigo cid kale.”
Halyeeyga Argentina oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ka hadlay sida uu u jeclaan lahaa inuu arko Lionel Messi oo xulkiisa kula guuleystay koobka adduunka, wuxuuna
“Aad baan u qadariyaa isaga, waxay noqon doontaa sida ugu fiican ee uu ku soo gabagabeyn doono xirfadiisa inuu ku guuleysto, waxaana rajeynayaa in taas la gaari doono, isaga dartiis.”
Waxaa xusid mudan in Argentina aysan ku guuleysan Koobka Adduunka tan iyo sanadkii 1986-kii, kaasoo uu hogaaminayay halyeygii hore ee Diego Maradona, iyadoo wixii xilligaasi ka dambeeyay ay xulku u soo baxeen finalka labo jeer oo kala ahaa 1990 iyo 2014, waxaana labada jeerba kaga guuleystay xulka Germany.